पाँचथरमा पहिलोपटक विज्ञानमा ‘प्लस टू’ | गृहपृष्ठ
Home शिक्षा पाँचथरमा पहिलोपटक विज्ञानमा ‘प्लस टू’
पाँचथरमा पहिलोपटक उच्चमाविमा विज्ञान सङ्कायको अध्ययनअध्यापन शुरू भएको छ । सदरमुकाम फिदिमस्थित फिदिम उच्चमाविले यस वर्षदेखि कक्षा ११ मा विज्ञान सङ्कायको अध्यापन शुरू गरेको हो । इच्छुक र क्षमतावान् विद्यार्थीले अब जिल्लामै बसेर विज्ञान विषय अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि विज्ञान विषय अध्ययनका लागि जिल्लाबाहिर जान नसक्ने विद्यार्थी अन्य विषय पढ्न बाध्य थिए । विज्ञान विषयको पठनपाठन गत मङ्गलवारबाट शुरू भएको उच्चमाविका प्राचार्य पुष्प भण्डारीले बताए । उच्चमाविले विज्ञान कक्षा सञ्चालनका लागि केही वर्षअघिदेखि प्रयास थालेको थियो ।
दुई वर्षअघि विज्ञान सङ्काय थप गर्न ‘अष्टदश महायज्ञ’ सञ्चालन गरी दानस्वरूप रू. ७० लाख सङ्कलन गरिएको थियो । सङ्कलन भएको उक्त रकमबाट महायज्ञको खर्च कटाएर रू. ५५ लाख ३८ हजारबराबरको रकम खातामा रहेको प्राचार्य भण्डारीले जानकारी दिए । विज्ञान विषयका कक्षा सञ्चालनका लागि नयाँ चारजना शिक्षक र एकजना ल्याब टेक्निसियनको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उच्चमाविले यसअघि नै प्रयोगशाला निर्माण गरे पनि त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्न रू. ६ लाख लाग्ने बताइएको छ । विज्ञान विषयका लागि भएको पहिलो प्रवेश परीक्षाबाट २७ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । केही दिनपछि अर्को प्रवेश परीक्षा गराउने तयारी भएको विद्यालयले बताएको छ ।
‘पूर्वी पहाडी जिल्लामा विज्ञान कक्षा सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक थियो,’ निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी युगमणि सवेहाङले भने, ‘अब यसलाई गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’ जिल्लाबाहिर गएर प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न कठिन भइरहेकाले जिल्लाका प्रतिभालाई यहीँ अवसर दिनुपर्छ भनेर लामो प्रयास गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राम थापाले स्मरण गरे । आफ्नै जिल्लामा विज्ञान विषय पढ्न पाउँदा खुशी लागेको कक्षा ११ मा भर्ना भई विज्ञान सङ्काय अध्ययन शुरू गरेका लोकेश बाँस्कोटाले बताए । विज्ञान सङ्कायको औपचारिक उद्घाटन पाँचथरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञप्रसाद आचार्यले एक समारोहबीच गरेका थिए ।